Iindaba - Usuku lonyaka omtsha ngo-2021
Kwinoveli coronavirus pneumonia epidemic esasazeke kwihlabathi liphela, sizokuvalelisa unyaka ka2020 sizise ngo2021. Kumsitho wokushiya abantu abadala ukwamkela izinto ezintsha, egameni leenkokheli zeqela laseChenguang bio, ndingathanda ukwandisa imibuliso yonyaka kunye neminqweno enyanisekileyo kubo bonke abasebenzi kunye neentsapho zabo ezisokolayo kumazwe aphesheya kunye nasekhaya, nakwiinkokheli kuwo onke amanqanaba, bonke abanini zabelo, abathengi, amaqabane kunye nabahlobo abavela kuzo zonke iinkalo zobomi abakhathaleleyo nabaxhasa uphuhliso lwe-Chenguang bio.
Iminyaka engamashumi amabini yokusebenza nzima, iminyaka engamashumi amabini entwasahlobo nasekwindla. Kule minyaka ingama-20 idlulileyo, besithe nca kumthetho-siseko wobulungisa obukhulu, sisebenza nzima kwaye sizinikele, kwaye asenzanga mizamo mincinane kunaye nabani na. I-Chenguang bio iphuhlise ukusuka kuhlobo lweshishini lendibano ukuya kwinkampani yeqela elidwelisiweyo elinenkxaso engaphezulu kwama-30. Ukusuka kwimveliso enye yoqobo ye-capsanthin, i-Chenguang bio ngoku ine-series ezintandathu, iindidi ezingaphezu kwe-100 kunye neemveliso zokuqala ezintathu zehlabathi lishishini eliphambili kushishino lokutsala izityalo. Ukusuka kumntwana omncinane ukuzola ukuzithemba, ukusuka kwisithole esingenamandla ukuya ekukhuleni kumthi onqabileyo, eli bali lamashishini elibhalwa ngabo bonke abantu baseChenguang ngomzabalazo kunye nokwenza izinto ezintsha!
Kwi-2020, inoveli ye-coronavirus pneumonia bhubhane yabetha kabuhlungu, kwaye uqoqosho lwehlabathi lwaphulukana nelahleko enkulu. Ekuqaleni kobhubhane, imeko yothintelo kunye nolawulo lwasekhaya yayinzima, kwaye izixhobo zonyango zazinqongophele. Inkampani ithenge utywala, iimaski, iimpahla ezikhuselayo kunye nezinye izixhobo ngezixhobo zasekhaya nakwamanye amazwe okokuqala ngqa, isebenze ixesha elongezelelekileyo ukwenza iicapsule ezithambile zeLycopene, kwaye yanikela kumgca wangaphambili wesifo sokulwa. Ngokusasazeka okukhawulezileyo kobhubhane welinye ilizwe, inkampani yanikela ngeemaski kwangexesha, iifomsile ze-lycopene ezithambileyo kunye nezinye izinto kubathengi bamanye amazwe. Ngexesha lobhubhane, ngaphezulu kwe-10 yezigidi ze-yuan yotywala, iimaski, iimpahla zokuzikhusela, iicypsene soft capsules kunye nezinye izinto ezichasene nobhubhane zanikelwa eluntwini, zanegalelo kumlo wokulwa nobhubhane. Kwelinye icala, ngokwemeko yothintelo kunye nokulawula ubhubhane, inkampani isebenzise ngononophelo ukuqala kwakhona komsebenzi kunye nemveliso ukuqinisekisa ukusebenza okuzinzileyo kwemveliso kunye nokusebenza, ngakumbi abasebenzi abalungiselelwe ukuba benze ukutyala nge-marigold eXinjiang ngokukhawuleza emva uMnyhadala waseNtlakohlaza, ukuze kuqinisekiswe ukuba umsebenzi wamaxesha onyaka awuyi kuchaphazeleka. Kunyaka ophelileyo, bonke abasebenzi benze iinzame ezinkulu zokunciphisa iziphumo ezibi zalo bhubhane, kuqinisekiswe ukusebenza okuzinzileyo kwenkampani kunye nokukhula kokusebenza kwamashishini ngokuchasene nomkhwa. Ingeniso yentengiso yenkampani kunye neenzuzo ziye zafikelela kwinqanaba elitsha, kwaye umvuzo wayo wokuthumela ngaphandle ungaphezulu kwe-140 yezigidi zeedola zaseMelika. Ixabiso lentengiso yalo lenyuke ukusuka kwi-3.8 yezigidigidi ekuqaleni konyaka ukuya kwi-9 yezigidigidi ngoku.
Kwi-2020, inkampani ibambelela kwingcinga yokujolisa kubathengi, iqhuba ngokunzulu ukuhlelwa kwezibonelelo, kwaye iphucula ukhuphiswano olubanzi lweemveliso. Umthamo wentengiso we-capsanthin ufikelele kwinqanaba elitsha; umthamo wentengiso weemveliso ze-lutein uqhubekile nokukhula, kwaye ngemowudi yokuthengisa kwangaphambili, idlale indima ebalulekileyo ekuzinziseni ukunyuka kwamaxabiso kunye nokugcina uphuhliso olusempilweni lweshishini; Iiprothini ezisetyenziswayo zixhomekeke kwikhredithi yokuqonda ukusebenza kokutshixa ngelixa kuthengwa kuthengiswa, kuthintelwa umngcipheko; Ukuthengiswa kokutya kwezempilo kuye kwafezekisa inkqubela entsha, i-OEM kunye neshishini lokuthumela ngaphandle sele liqalile, kwaye intsebenziswano yamanye amazwe ibe sisicwangciso esitsha sokuthengisa Inkqubo yophuhliso lweemveliso zesondlo kunye namayeza alungile, kwaye ukuthengiswa kwe-curcumin, ukukhutshwa kwembewu yomdiliya kunye nezinye iimveliso kufezekisile ukukhula. Kwangelo xesha, inkampani ikhuthaza ngenkuthalo ukwakhiwa kwesiseko sempahla eluhlaza. EXinjiang naseYunnan Tengchong, indawo yokutyala i-marigold ingaphezulu kwe-200000 mu; indawo yokutyala i-stevia ejikeleze i-Quzhou county ingaphezulu kwe-20000 mu; Ifama yesinazonggui yenkampani yezolimo yaseZambia igqibe i-5500 mu yokutyala ityala le-pepper, ifama ye-qishengsheng igqibe phantse i-15000 mu yophuhliso lomhlaba, kwaye yenze umsebenzi wokulima ityala le-marigold kunye nepepper.
Kwi-2020, inkampani ibambelela kutshintsho lwetekhnoloji yokuvelisa kwaye iyaqhubeka nokwenza ngcono ukhuphiswano lwayo. Ukuphuculwa kwenkqubo ye-silymarin kugqitywe ngempumelelo, imveliso ye-silymarin inyuke ukusuka kwi-85% ukuya kwi-91%, kwaye iindleko zemveliso zancitshiswa kakhulu; ulwandiso lomthamo wemveliso yeprotini yagqitywa eKashgar Chenguang, kwaye amandla okusingathwa kwemihla ngemihla kwembewu ekhanyayo yonyuswe ukusuka kwiitoni ezingama-400 ukuya kwiitoni ezingama-600; inkqubo yokuphuculwa kwemveliso ye-stevioside ifumene utshintsho kwimveliso ye-CQA; Ukuguqulwa kweemveliso zeQG ezikhutshwe kwisidlo seTagetes erecta kwagqitywa, kwaye umgca omnye wokusebenza kwemihla ngemihla wesidlo seChrysanthemum wafikelela kwiitoni ezili-10 zeetoni ezingama-0.
Kwi-2020, ulwakhiwo lweeprojekthi ezintsha zenkampani ziya kukhuthazwa ngokukhawuleza ukuqokelela amandla kuphuhliso lwexesha elizayo lwenkampani. I-biomass steam boiler sele isetyenzisiwe, kwaye iindleko zomphunga zincitshisiwe; Imigca emithathu yokukhutshelwa kweYanqi Chenguang idityanisiwe, kwaye amandla okulungisa imihla ngemihla amasuntswana epepile ziitoni ezili-1100. Kwangelo xesha, ulwakhiwo lokusulungekisa kunye nokudibanisa umgca wemveliso kugqityiwe, kwaye imveliso ehlanganisiweyo yokutsala, ukucokisa kunye nokudibanisa ngokuthe ngqo kweemveliso zepepile eXinjiang kufezekisiwe. Inkampani yaseTengchong Yunma ifumene iphepha-mvume lokulungisa i-hemp kunye notyalo-mali oluncinci, yaqonda ukukhutshwa kobuchwephesha obuphambili kwaye yenza ukuthengiswa kwemveliso, kwaye yenza inyathelo eliqinileyo kubume beshishini lobeko lweqhinga. Ukwakhiwa "amaziko amathathu" yenkampani Handan Chenguang wenza intuthuko, i-R & D iziko kunye neziko zovavanyo zavulwa ngokusesikweni, 8 yokulala izakhiwo ahlala, 7 izakhiwo yokulala kunye nezakhiwo zokulala 9 zaye zagqitywa ukwakhiwa; iibhondi eziguqulwayo zakhutshwa ngokutyibilikayo, zinyusa izigidi ezingama-630 zeerandi; umgca wemveliso entsha ye-oyile enqabileyo, iprojekthi yeHetian Chenguang kunye neprojekthi ye-Yecheng chengchenlong yaqaliswa ukusebenza; ulwakhiwo lweprojekthi yeTumushuke Chenguang kunye neprojekthi ye-API zenziwe ngocwangco.
Ngo-2020, inkampani ibambelela undoqo R & D ukukhonza imveliso kunye nokusebenza, ngokuqhubekayo ikhuthaza inkqubo yenkqubo imveliso, kwaye gqolo kuphuhliswa iimveliso ezintsha kunye nezicelo. Ngophando kunye nokuphuculwa kwenkqubo yokususa ityiwa yepelepele oleoresin kunye nenkqubo yonyango yokunyanga ibala, isicelo semveliso sazalisekiswa, ingxaki ye-inventri isonjululwe, kwaye unikezelo lweemarike lwazinziswa; Inguqu kwimveliso ye-lycopene oleoresin saponification kunye ne-crystallization projekthi yagqitywa, kwaye imveliso yemveliso yaphuculwa kakhulu; ukuguqulwa kwemizi-mveliso ye-rosemary extract, i-silymarin kunye nezinye iiprojekthi zemveliso ezintsha zagqitywa, kwaye ukuthengisa okukhulu kwenziwa; I-QG, i-CQA, i-Wanli, njl njl. Ulwalathiso lwesicelo se-Shouju fermentation extract, igalikhi polysaccharide kunye nezinye iimveliso ezintsha zimiselwe ngokusisiseko; ubuchwephesha bokukhangela ubuchwephesha obukwi-intanethi nangaphandle kweintanethi buye baphumelela, kwaye ulwakhiwo lweqonga lokwenza ngempumelelo lenze inkqubela phambili entsha, ebeke isiseko esiluqilima sophuhliso lwenkampani lwexesha elide kwixesha elizayo. Inkampani yanikwa iwonga lesithathu "elenzelwe eTshayina · intshatsheli engabonakaliyo" kunye "no-Oscar" weembasa zeshishini lase China.
Kwi-2020, inkampani iya kugaya ngaphezulu koogqirha kunye neenkosi ezingama-60 zokufaka igazi elitsha kwishishini; uvavanyo oluzimeleyo lwezihloko zobungcali luchaza indlela yolawulo lwamanqaku, kwaye inani leenjineli eziphezulu liya kunyuka liye kuma-23; izakuqhubeka nokwenza nzulu indlela yoqeqesho lweetalente “zentsebenziswano kumashishini esikolo, ukudityaniswa kwemfundo kushishino”, kunye ngokudibeneyo ukuqeqesha oogqirha kunye neenkosi ezi-6 ngokudibeneyo. Abasebenzi abathathu benkampani bakhethwe njenge “ziphiwo ezintshatsheleyo ezisencinci kwiSixeko sase Handan” kunye “neProjekthi yeeTalente ezintathu ezintathu” kwiPhondo lase-Hebei; U-Yuan Xinying uphumelele isihloko esithi "imodeli yezabasebenzi yesizwe" kwaye waba ngomnye umfuziselo wabasebenzi wesizwe eQuzhou emva kweminyaka engaphezulu kwama-30, ebonakalisa ngokwenyani "uphuhliso oluqhelekileyo lwabantu namashishini".
Ngo-2020, inkampani iya kuqhubeka nokuphucula inkqubo yolawulo kunye nokunyusa izinga lokulawula kakuhle. Siyaqhubeka ukukhuthaza ukumiselwa komgangatho, ukwenziwa kwenkqubo, kunye nokuphuculwa kokusebenza kunye nemigangatho yokusebenza. Qhubeka ukukhuthaza iinkqubo ezisixhenxe zolawulo lwemveliso, kwaye ubeke isiseko solawulo kulwakhiwo lweworkshop yedijithali. Isebe lolawulo liphinda liphucule inkqubo yolawulo efikelela kwiinkxaso-mali kunye nokomeleza ulawulo nokulawulwa kweenkxaso-mali. Qhubeka uphucula uvavanyo kunye nemo yenkuthazo, kwaye udlale ngcono isikhokelo nendima yenkuthazo yovavanyo nenkqubo yenkuthazo.
Emva kweminyaka engama-20 yokusebenza nzima, inkampani iqokelele iitalente, itekhnoloji, ikomkhulu, iqonga, inkcubeko kunye nezinye izixhobo. Kwixesha elizayo, siza kuqhubeka ukunika umdlalo opheleleyo kwizibonelelo zetekhnoloji yokutsalwa kwezityalo, izixhobo zemveliso, isiphelo esiphezulu se-R & D kunye nolawulo lomgangatho, ukudibanisa izixhobo eziluncedo emhlabeni, ukukhawulezisa inkqubela phambili yokwakha isiseko sempahla eluhlaza eZambia, Ukuqhubeka nokwakha isicatshulwa sendalo kunye neqonga lezempilo lebhayoloji, kunye nokukhuthaza ngokuqinileyo ishishini lezeMpilo elikhulu libonelela ngokutya okusempilweni kwaye kufikeleleke kuluntu.
Ngo-2021, kufuneka senze umsebenzi oqinileyo ekuhleleni iingenelo zeemveliso zethu, siqhubeke nokwenza izibonelelo eziphangaleleyo zokhuphiswano kwiimveliso zethu, kwaye sandise ngakumbi isabelo sentengiso se-capsicum, capsicum oleoresin, kunye neemveliso ze-lutein; yenza imveliso eyodwa kukhuphiswano lweemveliso zesondlo kunye neyeza, i-stevioside, kunye neemveliso zeziqholo, kwaye uzame ukuba yinkokheli e-China; Thatha amanyathelo amaninzi ukukhuthaza ukuphuculwa kweGinkgo biloba, irosemary, isilymarin, kunye neemveliso zorhwebo Ukuthengiswa kweemarike zehemmp kunye nezinye iimveliso kuya kukhawulezisa ukulinywa kwamanani okukhula koqoqosho kwenkampani, kunye nokuhanjiswa kokutya okusempilweni kunye namayeza esiTshayina iya kuqhubeka nokuphucula ukhuphiswano lwabo kwaye izabalazele ukufumana izibonelelo ezingaphezulu.
Kwi-2021, kufuneka sihambelane nomxholo "weetalente, impumelelo kunye nezibonelelo", ngokuqhubekayo sisebenzisa indlela yolawulo yophando lwezenzululwazi, kwaye sikhawulezise inguqu kwimpumelelo yenzululwazi kunye netekhnoloji. Bambelela kusetyenziso olubanzi lwezixhobo, uqhubeke ukukhuthaza uphuhliso kunye nophando lweemveliso ezichasene namachiza, ukukhawulezisa ukwakhiwa kwegama elizimeleyo lokutya kwezempilo, nokukhawulezisa uphuhliso lwamashishini ezempilo. Nge "amaziko amathathu" njengenkxaso, zama ukwakha "iqonga lamazwe aphesheya" lophando lwenzululwazi. Kufuneka sizabalazele ukuqokelela iklasi yokuqala ebanzi, eyingcali kunye neetalente ezihamba phambili kushishino ekhaya nakumazwe aphesheya, sihlala siphucula inkqubo yoqeqesho lwabasebenzi, sinika umdlalo opheleleyo kubuchule babasebenzi, kwaye sizame ukwakha iqela leengcali zeshishini eliphezulu Efuna ukusebenza, inokusebenza kwaye inokuxhasa ukukhula ngokukhawuleza kwenkampani.
Kwi-2021, siza kuqhubeka nokukhuthaza ukwakhiwa komgangatho wolawulo, inkqubo kunye nayo, kunye nokuphucula ngakumbi inqanaba lolawulo oluhle. Ukuqhubeka nokudibanisa kunye nokuphucula inkqubo yolawulo lokhuseleko kwimveliso, ukomeleza ulwazi lomgca obomvu ngemveliso yokhuseleko, ukuqinisekisa ngemveliso yokhuseleko; yenza umsebenzi oqinileyo kulawulo lweenkqubo ezisixhenxe zemveliso, ucwangcise ngenkuthalo ulwakhiwo lweeworkshop zemodeli yedijithali, uqhubeke nokwenza izibonelelo zemveliso, ukuphucula ukhuphiswano olubanzi lweemveliso; Ukukhuthaza ngokubonakalayo uhlengahlengiso lwecwecwe lekhotile, kunye nokukhuthaza ukukhula ngokukhawuleza nangcono kweshishini leplate.
Ngo-2021, siza kuqhubeka nokuxhasa ingcamango yenkcubeko engundoqo “yophuhliso oluqhelekileyo lwabantu namashishini”, siqhubele phambili inkcubeko yenkcubeko yokucoceka nokunyaniseka, ukukhuthala nokuzinikela, ukunyaniseka nokuthembeka, ukunyaniseka nokuziphatha, ukuhambelana nomgaqo Ukuzabalazela abantu, kunye nokubonelela ngeqonga lomsebenzi weklasi yokuqala uninzi lwabasebenzi ukuba bafeze amaphupha abo kunye neenqobo zabo.
Kunyaka omtsha, kufuneka sihambelane nesikhokelo esitsha kunye nomzabalazo onzima, ngomoya wokubamba usuku kunye nokunyamezela, inyathelo ngenyathelo, ukuya kwinjongo enkulu yokwakha isiseko semveliso yelizwe, ukwenza ishishini lezempilo lebhayoloji likhulu kwaye yomelele, kwaye yenza igalelo kwimpilo yabantu, qhubela phambili ngesibindi, kwaye ngokudibeneyo uqamba ikamva eliqaqambileyo lebhayoloji yeChenguang!
Okokugqibela, ndininqwenelela usuku oluhle loNyaka oMtsha, umsebenzi ogudileyo, ulonwabo losapho kunye nakho konke okuhle!